जहाँ बन्दैछ कोरोनाविरुद्ध लड्ने हतियार ! « प्रशासन
जहाँ बन्दैछ कोरोनाविरुद्ध लड्ने हतियार !
प्रकाशित मिति : 15 April, 2020 3:10 pm
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा पछिल्ला दिनमा मानिसको आवतजावत बढीरहेको छ । दैनिक नै एक दर्जन बढी एम्बुलेन्स त्यहाँ पुग्छन् । केही समय बस्छन् र लगत्तै फर्कन्छन् । कहिले नेपाली सेनाका सवारी पुग्छन् त कहिले सशस्त्र प्रहरी बलका । कहिले नेपाल प्रहरीका सवारी हान्निँदै पुग्छन् । वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पतालका एम्बुलेन्स पनि उत्तिकै पुग्छन् । एम्बुलेन्स किन गएका होलान् भनेर जिज्ञासा पनि आमरुपमा उत्पन्न हुनसक्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सरकारले तय गरेको मापदण्डविपरित गएर भने विश्वविद्यालय परिसरमा कुनै भीडभाड गरिएको छैन । आखिर के छ त ? विश्वविद्यालय परिसरमा ।
जवाफ सहज छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनेलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याती कमाएका महावीर पुनले विश्वविद्यालय परिसरमा नै केन्द्र स्थापना गरेका छन्। केन्द्रमा आजकल दैनिक २० जना दिनरात नभनी काम गरिरहेका छन् । केन्द्रका प्रमुख पुन पोखरामा छन् तर उनी पोखरामा रहेको भान कोही कसैलाई पनि छैन । केन्द्रमा भइरहेको काम कारवाहीको बारेमा उनले श्रव्यदृश्य माध्यमबाट निगरानी मात्रै गर्दैनन्, निर्देशनसमेत दिन्छन् । ‘तिमी केटाहरुले सङ्कटको समयमा पार लगाउन सक्छौं, कि सक्दैनौँ, नेतृत्व क्षमता देखाउन सक्छौं, कि सक्दैनौँ भनेर जिम्मा नै दिनुभएको छ पुन सरले’, आविष्कार केन्द्रमा संयोजन गरिरहेका इन्जिनीयर शङ्कर ढकालले भने ।
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगाउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नै कोरोनाको महामारी बढ्दै गएको बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) उत्पादन गरिरहेको छ केन्द्रले । पीपीई मिलाउने र पट्याउने काममा विगत १० दिनदेखि खटिइरहेका पर्वतका अमबहादुर रोकालाई पनि सङ्कटको समयमा दिनरात नभनी काम गर्दा पनि थकाइको महसुस भएको छैन ।
कोभिड–१९ लागेका मानिसका लागि खाना औषधि पुर्‍याउन रोबर्ट बन्दैछ । सो कार्यका लागि इन्जिनीयर सुरज कार्की, किरण रौनियार, रिकेश देव, राम चौधरीलगायत छ जनाको समूहले काम गरिरहेको छ । फ्याकिएका ट्रलीको सदुपयोग गरिएको छ । बाहिरबाट मालसामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । फ्याकिएका सामान नै प्रयोग गरेर रोबर्ट तयार हुँदैछ । सोमबार डेमो गरिसकिएको छ । ‘स्वचालित बनाउनका लागि आवश्यक प्रणाली जडान हुँदैछ, अब केही दिनमा तयार पार्छौँ, यसले बिरामी जहाँ हुन्छ त्यहाँ खाना र औषधि लिएर जान्छ, मानिस गइरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन’, ढकालले भने ।
रोबर्ट अबको तीन दिनमा तयार हुनेछ । सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित अस्पतालमा विभिन्न तीन तल्लामा कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने स्थान बन्दैछ । आईसीयू तयार हुँदैछ । वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, टेकु अस्पताल सबै क्षेत्रमा १५ देखि २० वटा रोबर्ट तत्कालै आवश्यक परेको छ । माग पनि उत्तिकै आइरहेको छ, केन्द्रलाई । कोरोनाको उपचार गराइरहेका बिरामी र चिकित्सकबीच कुनै पनि समयमा प्रत्यक्ष सम्पर्क नहोस्, खाना तथा औषधि पुर्‍याउनसमेत सहज होओस् भनेर नै रोबर्ट तयार पारिएको इन्जिनीयर कार्कीले बताए ।
“योसँगै गौरवकै नेतृत्वमा पीपीई, ग्लोब्स, मास्क डिसइन्फेक्सन गर्ने यन्त्रको आविष्कार गरिरहेको छ । काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । एक प्रकारको अल्ट्रा भाइलेट रे युक्त (यूभी) बनाइँदै छ । त्यो झण्डै ओभन जस्तै हुन्छ । केही दिनमा तयार हुँदैछ”, दासले भने । त्यसभित्र एक प्रकारको बक्सा हुन्छ । त्यहाँ राखेपछि एक पटक प्रयोग गरिएका सामान फेरि प्रयोग गर्न सकिने गरी भाइरसरहित बनाइन्छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षात्मक सामग्रीको अभाव भइरहेको बेलामा निर्मलीकरण गरेर पनि प्रयोग गर्नसक्ने ओभन जस्तै यूभी बनाउन लागिएको दासले जानकारी दिए ।
जनकपुर निवासी २६ वर्षका गौरव मेकानिकल इन्जिनीयर तथा जुनियर वैज्ञानिक पनि छन् । दुई वटा शोधको त उनीसँग ‘प्याटेन्ट राइट’ नै छ । सब्जी कोठी र दर्जी उनको प्याटेन्ट राइट भएका अविष्कार हुन् । दास थापाथली इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका विद्यार्थी छन् ।
स्यानिटाइजिङ टनेल पनि गौरव कै नेतृत्वमा बनिरहेको छ । के छ त यसको विशेषता ? हाम्रो प्रश्न थियो, दासलाई । बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य कर्मचारीले आवतजावत गर्दा, बाहिर गएर आउँदा त्यो टनेलले पूरै शरीर ‘स्यानिटाइज’ गर्छ । त्यस्तै खालको टनेल टेकु अस्पतालमा जडान गरिएको छ । त्यो आयातित हो । दासको समूहले फालिएका र काम नलाग्ने सामग्रीबाटै टनेल बनाइएको हो । सो मेशिनले हातमा स्यानिटाइजर गरे झैँ पूरै यसबाट शरीरलाई स्यानिटाइज गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा एक मानिसबाट अर्को मानिसमा भाइरस सर्न पाउँदैन । मेसिनले नै शरीरमा एकैचोटी स्वानिटाइज गर्ने प्रविधि यसमा जडान गरिएको छ ।
आविष्कार केन्द्रमा निर्माण भइरहेको अर्को सामग्री हो एम्बु ब्याग । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा अक्सिजन दिँदा म्यानुअल पम्पिङ गर्ने गरिन्छ । अस्पतालमा अब यो तयार भएपछि मेसिनले अटोमेटिक रुपमा पम्प गर्छ । भेन्टिलेटरमा यो खालको मेशिन राख्दा झनै प्रभावकारी हुन्छ । अस्पतालमा वा एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा बिरामी लैजाँदा एम्बु व्यागले ठूलो काम गर्छ । गम्भीर बिरामीलाई अक्सिजन पम्पिङ गर्दा हात प्रयोग गर्नु पर्दैन । सिधै मेशिनले गर्न मिल्ने गरी यो बनाउन लागिएको हो । हाल त्यस्तो खालको ब्याग देशभरी जम्मा ५०० मात्रै होला ढकालको दाबी छ ।
कोरोनाको शङ्का लागेका बिरामीको स्वाब परीक्षणका क्रममा सबैभन्दा बढी सक्रमणको जोखिममा चिकित्सक नै हुन्छ । उपचारका क्रममा बिरामीले वाकवाक गर्छ, ह्याच्छयूँ गर्छ, त्यसबेला त्यो थुक चिकित्सक नर्ससम्म आउन नदिनका लागि नयाँ बाकस आविष्कार गरिएको ढकाल बताउँछन् । जसको नाम ‘एरोसल बक्स’ राखिएको छ । एउटा बाकसमा सिसा लगाइएको हुन्छ । हात छिर्न मिल्ने गरी दुई वटा प्वाल बनाइएको छ । बिरामी बेडमा रहेको बेलामा आवश्यक परीक्षण र उपचारका क्रममा यो बक्स प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न अस्पतालबाट यसको माग भइरहेको छ । चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र शिक्षण अस्पतालबाट समेत माग आइसकेको छ ।
उक्त बुथको अर्को साइटमा छ मिटर लामो पाइप राखेर उपयुक्त फ्यान राखिएको छ । जसले दूषित हावा बाहिर फाल्छ भने ताजा हावा चिकित्सकसम्म पुर्‍याउँछ । कतिपय ठाउँमा प्रयोग गरिएको बुथहरु सुरक्षात्मक नभएकाले हटाउन भनिसकिएको ढकालले बताए ।
आविष्कार केन्द्रमा पीपीईको विज्ञ कोही पनि थिएनन् तर अवस्थाले पीपीई विज्ञ बनाइदियो । समस्या आइसकेपछि पीपीईबाट काम शुरु गर्ने निर्णय भएको ढकालको भनाइ छ । ‘त्यसको माग बढी थियो । चिकित्सक नै सङ्क्रमित भए भने धेरैलाई प्रभावित पार्ने भयो भनेर हामीले त्यसको अनुसन्धान थाल्यौँ’, ढकालले भने, ‘वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट नमूना मगाएर हेरियो । त्यो हेर्दा वाटर पेनिटेसन थिएन । पानी छिर्ने भेटियो । त्यसपछि अनुसन्धान टोलीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइनको अध्ययन गरियो ।’ गाइडलाइनमा भनिएको थियो वाटर प्रुफ्ट, एयर प्रुफ्ट र भाइसर प्रोटेक्टिभ हुनुपर्छ पीपीई । त्यसपछि हामीले कुन कपडा कस्तो छ भनेर हामीले खोजी गर्‍यौँ । ‘डबल लेयर, रबराइज, टाफेटा भन्ने फ्यावरिक पत्ता लाग्यो । यो फेवरिक जापानको उत्पादन हो । कम्पनीले नै भाइरस प्रोटेक्टिभ भनेर प्रमाणित गरेको कपडा हो ।’
पहिले प्रयोग भइरहेका पीपीईमा हाई प्रेसरमा पानी पठाउँदा पानी पस्ने गरेको पाइयो भने यो पीपीईमा भने जति प्रेसर गर्दा पनि पानी नपसेको ढकालको भनाइ छ । गुणस्तर विभागले मापदण्ड हेरेर ठीक छ भनेको छ । केन्द्रले विभागलाई नमूना दिएर आवश्यक प्रस्तुति गरेरै काम गरेको हो । पीपीई आवश्यक डिजाइन गरेर निश्चित टेलरमा सिलाउने गरिएको छ । विभागको सुझावको आधारमा पानी नपस्ने खालको र एयर प्रुफ जीफर प्रयोग गरिएको छ । ‘सकेसम्म कम सिलाउने गरिएको छ । सिलाएको ठाउँमा समेत पानी र हावा छिर्न नसक्ने गरी टेप लगाइएको छ । सकेसम्म साइन्टिष्ट र मेडिकल विद्यार्थीबाट मेहनत गरेर बनाएका छौँ’ ढकालले भने ।
अहिलेसम्म दुई हजार ८०० भन्दा बढी बनाएर निःशुल्क रुपमा वितरण गरिसकेको छ, केन्द्रले । सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ केन्द्रको पीपीई । माग बढ्दो छ । अझै तीन/चार हजार माग छ ढकालले आँकडा सुनाए । उनले भने, ‘टेप र जिफर सरकारले उपलब्ध गराइदियो भने नेपाललाई चाहिने सबै पीपीई हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ ।’ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले एउटा स्टाण्डर्ड (गाइडलाइन) निकालेको छ । यो निकालेपछि यसैलाई फलो गरेर अन्य ठाउँबाट पनि उत्पादन शुरु गरिएको छ । यही हाम्रो गाइडलाइनबाट बनिरहेको छ । एम्बुलेन्स चालकका लागि पनि छुट्टै पीपीई बनाइएको छ । दुई सयभन्दा बढी चालकले लगिसकेका छन् ।
त्रिविवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल टेकु, आर्मी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल तथा निजी अस्पताल सबैलाई पीपीई दिइएको ढकालले बताए । ‘अझै माग आइरहेको छ । हामी दैनिक १८ घण्टा बढी खटेर पीपीई बनाइरहेका छौँ’, ढकालले भने, ‘कुन अस्पतालाई चाहिन्छ, के कति मात्रामा माग छ भन्ने कुरा महावीर पुनले नै तथ्याङ्क लिनुहुन्छ, र यहाँ पठाउनुहुन्छ । हामी सोहीअनुसार दिएर पठाउछौँ ।’ पीपीईमा जापानीज फेबरिक प्रयोग हुन्छ, त्यसमा पनि डबल लेयर्ड रबराइज हुनुपर्नेछ, काट्ने र सिलाउने ठाउँ कम गरिएको छ । काटेको ठाउँमा टेपिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने, जिफर हावा र पानी नछिर्ने हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
काठमाडौँ मै बस्ने पर्वतका अमबहादुर रोक्का पनि पीपीई पट्याउँदै थिए । उनी ९ दिनदेखि स्वयंसेवकको रुपमा काम गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सहयोग गर्न यहाँ काम गर्न आएको । सेवा भनेको दुःख पर्दा हो सुख पर्दा जसले पनि गर्छ । त्यही भएर सेवा गर्न मन लागेको छ । यहाँ यसरी झण्डै २० जनाले काम गरिरहेका छन् । रात दिन नभनी काम भइरहेको केन्द्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराए कोरोना नियन्त्रणका लागि विदेशबाट सामान आयात गर्नै नपर्ने ढकालको दाबी छ । हालसम्म सबै सामग्री निःशुल्क दिइएको छ । अमेरिका नेपाल चिकित्सक सोसाइटीले केही सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यस्तै नेपालभित्रका केही दाताले सक्दो सहयोग गरेका छन् । सोही सहयोगका आधारमा नै केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सक्दो सहयोग गरेको छ । सरकारले आफूहरुलाई साधन र स्रोत उपलब्ध गराए देशभित्रै स्वास्थ्य सामग्री बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै ढकालले नेपाली युवा वैज्ञानिकको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
बिरामीको उपचारका क्रममा अक्सिजन दिन प्रयोग हुने स्वचालित एम्बु ब्याग (रेसुसिटेटर) निर्माण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियर शङ्कर ढकाल ।
काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बिरामीलाई औषधि र खानेकुरा पुर्‍याउन जाने रोर्बुट तयार पार्दै इन्जिनियर । फ्याँकिएका ट्रली प्रयोग गरेर सो रोर्बुट तयार हुँदैछ ।
कोरोना भाइरस स्याम्पल कलेक्सन बुथ (पिपिई बुथ) को बारेमा जानकारी दिँदै इन्जिनियर शङ्कर ढकाल ।
काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा तयार भएको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) व्यवस्थापन गर्दै स्वयंसेवक अमबहादुर रोक्का । यहाँ दैनिक सयौँ पिपिई निर्माण भइरहेको छ ।
Tags : कोरोना रोबर्ट